Obi ụtọ na afọ ọhụrụ chọrọ SMS 2018 - Lovesmsbd.com | New Bangla SMS
Home Unlabelled Obi ụtọ na afọ ọhụrụ chọrọ SMS 2018
Obi ụtọ na afọ ọhụrụ chọrọ SMS 2018
1.) Ọbụna n'oge kasị awa nke ndụ gị, m ga-ada site gị n'akụkụ jidere naanị kandụl na-amụnye ọkụ na niile na-abụghị ìhè ebe. Ka Chineke n'ụba ị na niile obi ụtọ na ụwa! Obi ụtọ na New Year 2018!
2.) Olileanya ndị ezi chọrọ inyere gị aka na-eme ememe na-akpali akpali na kpokọtara New Year. N'ịchọ ị a nnọọ obi ụtọ New Year.
3.) Cheers na New Year, nke ga-Olileanya gējuputa jisie na obi ụtọ. Ezi afọ ọhụrụ!
4.) Anya nwere ike a na-edebe anyị dị iche ma obi anyị ọnụ. Obi ụtọ na New Year na ọṅụ nke ndụ m!
5.) Ka afọ ọhụrụ jupụta ihie na olileanya ka ọchịchịrị na mwute ịnọ n'ebe ị. Ezi afọ ọhụrụ!
6.) Olileanya gị New Year jupụtara ịga nke ọma, ahụ ike, ọganihu na obi ụtọ. Ezi afọ ọhụrụ!
7.) Ka ị na-enwe oké afọ jupụtara nnukwu obi ụtọ na chioma! Nọrọ na ezi ahụ ike ma nweta ukwuu elu nke ọma. N'ịchọ ị a magburu onwe afọ n'ihu!
8.) Ọ bụ New Year na oge kacha mma na-eme gị dictionary nke ndụ. Wepụ okwu dị ka ekworo, ịkpọasị, mmegwara, anyaukwu gị dictionary ma na-etinye okwu dị ka ịhụnanya, na-elekọta, ọmịiko, ime ihe n'eziokwu na afọ ojuju na-ha. Nke a ga-hụ na ị na-enwe oké na ikpe ọmụma-free afọ n'ihu.
9.) Inwe ị ná ndụ m ka obi sie m na m nwere onye na-adabere na-akpọ elu n'oge mkpa. Dị ka afọ a na-abịa na njedebe, anyị na-ahụ ọzọ afọ edozi n'ime ndụ anyị na-enye anyị ohere ọzọ na-ahụ maka onye ọ bụla ọzọ. Ezi afọ ọhụrụ!
10.) E nwere ọtụtụ ihe na ụwa ma na-hụrụ na ahụmahụ. Ndụ ndụ gị, inyocha ọhụrụ horizons, na-aga n'ihi ọhụrụ ahụmahụ a New Year na ị gaghị akwa ụta na ya.
11.) Nke a na ozi bụ na-ezitere m sitere n'obi ekele gị na ezinụlọ gị. Olileanya na unu nwere oké afọ na ga nwere ọbụna a mma otu a. Wepụta oge ka gị nso na hụrụ n'anya. Enwe!
12.) ọzọ ika afọ ọhụrụ bụ ebe a otú fanye gị ume ma na-set na-enwe. Ahapụ niile na-echegbu, obi abụọ na-atụ egwu na dị nnọọ na-eso iwu nke ochi, ịhụnanya, ndụ.
13.) 2018 dị gburugburu akuku, na-ya n'uche na ị na-ebi naanị otu ugboro, ndụ bụ nịịka, iwu na-pụtara na a ga-agbaji ya na inwe fun na-eke na-echeta bụ ihe kasị mkpa.
14.) Nke a New Year m chọrọ n'ihi na ị bụ n'ihi na ụbọchị ndị na-na-hassle free, nke uche na bụ nsogbu free na ịhụnanya nke dị ọnọdụ free.
15.) Ka anyị New Year mkpebi na-adị n'ebe onye ọ bụla ọzọ na-enyere mmadụ ibe mkpa ọbụna ma ọ bụrụ na anyị amaghị ha n'onwe. Ya mere-abịa ka agbasa ụfọdụ ka obiọma na bụ'abụ!
16.) Ka ọhụrụ anyanwụ nke New Year na-ewetara gị ike na vibrancy mgbe ọnwa ọhụrụ nke New Year na-eweta gị udo na obi iru ala!
17.) Olileanya ọma ọ bụla ugbu a na New Year na-eje ozi dị ka a bara uru akụ a mma echi. Enwe New Year.
18.) All site aga afọ m bugged na iwe na hell nke gị. Taa, na mmalite nke a afọ ọhụrụ m chọrọ ekwe unu nkwa na m ga-anọgide na-eme ya afọ a kwa. Jisie na na!
19.) Ọ bụrụgodị na ọ bụ a afọ ọhụrụ na ihe nwere ike ịgbanwe, m olileanya ịnọgide anyị mmekorita na na-na a nkekọ rụọ ọrụ nke ọma n'ihi na ọtụtụ ndị ọzọ afọ na-abịa. Uche gị oké afọ ọhụrụ!
20.) Years-abịa na-aga, ma nke afọ a na m karịsịa na-achọ gị okpukpu abụọ nke dose of ike na obi ụtọ topped na a dum ọtụtụ nke ịhụnanya. Ezi afọ ọhụrụ!
21.) akụ aka akụ aka! Abụ m New Year na m ebe a na-niile ịhụnanya, obi ụtọ, ngọzi na ezi uba n'ihi na ị. Ka m na-emeghe ogwe aka.
22.) Ọtụtụ afọ nwere ike abịa ma na-ma ọbụbụenyi anyị ga-adịru a ndụ na anyị ga-adị iro. Ya mere, tupu anyanwụ ka, m na-achọ inwere ị a obi ụtọ na fabulous New Year.
23.) Ka anyị na-apụ nke afo gara aga na-abanye n'ime afọ a, m na-ezitere gị sitere n'ala ala obi na ọchịchọ jupụtara n'ịhụnanya, chioma, obi ụtọ na ọṅù. Ezi afọ ọhụrụ!
24.) Olileanya na gị niile nsogbu na ihe mgbu-adịru nanị dị ka ogologo dị ka gị New Year amuma. Ezi afọ ọhụrụ!
25.) E nwere ihe unbolted ụzọ na-echere gị na ikpo ohere na n'akụkụ nke ọzọ nke ya. Jide ndị a New Year na nwere ihe ịga nke ọma afọ n'ihu.
26.) Ka Chineke n'ụba ị na 12 ọnwa nke-enwe obi ụtọ, 52 izu ụtọ, 365 ụbọchị nke rụzuru, 8760 awa nke jisie, 52600 nkeji nke ezi ahụ ike na 31536000 sekọnd nke ecstasy na ọṅụ zuru okè! Ezi afọ ọhụrụ!
27.) Nke a New Year m na-achọ a akụ na-aga na-enye m nnukwu ego mgbe ahụ chefuo m ruo mgbe ebighị ebi. Ị ka m mara ma ọ bụrụ na ị na-ahụ otu! Obi ụtọ na New Year BTW!
28.) Dị ka dum ụwa gbara anyị gburugburu eto site na otu afọ, m na-atụ gị nwere a obi na-anọgide ka okorobịa na-eji obi ụtọ dị ka mgbe niile.
New Year Ozi
29.) Ma eleghị anya, a New Year na-aga ịbụ onye na-emezu gị niile na nrọ na otú na-amalite ya na a ọṅụ na a vibrant mkpụrụ obi! Ebe a na-achọ inwere ị bara ọgaranya afọ ọhụrụ!
30.) m chọrọ kwụsị niile m na-ezighị ezi ọchịchọ ebumpụta ụwa maka elu ma na-abịa afọ; Otú ọ dị mgbe ahụ, m ghọtara na ọ dịghị onye na-arụ a emeriri.
31.) Ka ndị nile na sekọnd, nkeji, awa, ụbọchị, izu na ọnwa nke New Year-eme ka ị na nnukwu ọṅụ na chioma! Ezi afọ ọhụrụ!
32.) Anyị kwesịrị ikele Chineke maka imeghe ọzọ ọhụrụ page nke ndụ anyị. Olileanya ibi ọ bụla oge na-arụrụ ya.
33.) a bụ onyinye nke ịhụnanya, ọbọp na-elekọta, kegide na ezi okwukwe na akara na nke sitere n'obi chọrọ. Ezi afọ ọhụrụ!
34.) Ka onye ọ bụla ụbọchị nke na-abịa afọ iweta obi ụtọ, obi ụtọ na-atọ ụtọ ịtụnanya na gị n'ọnụ ụzọ! N'ịchọ ị na ndị niile gị hụrụ n'anya a fabulous New Year.
35.) Echefu niile mgbu, sorrows na ọdịda nke ndị gara aga afọ. Mmadụ Bịa na nke afọ a na a na ezi ndị na nnukwu ọnụ ọchị. Ezi afọ ọhụrụ!
36.) The New Year bụ zuru okè oge ime ọhụrụ horizons na ifiọkde niile nrọ. Ịmaliteghachi ịkụzi ume na obi ike ahụ dị n'ime gị na-anọgide na-aga n'ihu.
37.) Ka ị na-agọzi ihe a afọ ọhụrụ
na udo, na ezi ịhụnanya na unconditioned ọṅụ!
Ezi afọ ọhụrụ!
38.) On na New Year, anyị anya azụ na ihe niile na-ekpo ọkụ na-echeta, na-akọrọ ndị anyị rụzuru na ịmụta ihe site n'aka anyị gara aga emehie ihe. Ndi a afọ jupụtara adịghị agwụ agwụ fun na laugher.
39.) Tupu ọwụwa anyanwụ nke mbụ anyanwụ nke 2018, ka m agba niile ụzarị na ngọzi nke ịga nke ọma na obi ụtọ n'ihi na ị. Ebe a na-achọ inwere ị a magburu onwe New Year!
40.) Ka anyị tinye a New Year ọnụ, ka na-ekwe nkwa mgbe niile ebe ahụ maka onye ọ bụla ọzọ na-ebili n'elu bụla ọdịda na emezighị emezi. Ezi afọ ọhụrụ!
41.) Mgbe ị na-na-aga nke ọma, ndị kasị mkpa na-achị bụ ịnọgide na-aga n'ihu na mgbe anya n'azụ. Ka ị na-eru ihe mgbaru ọsọ gị na-enwe a bara uru na njem!
42.) Na nke a New Year, ka eme ka a nkwa onwe. A nkwa na-a mma mmadụ, a mma ezinụlọ onye na ọtụtụ ihe a mma ịbụ nwa amaala mba anyị.
43), ehihie na abalị na-ọchịchịrị ma ụbọchị na-egbuke egbuke, na-na gị isi na obi n'ebe a na nke ahụ dị mma. Adịghị na-mwute dị ka ọ bụ ihe fọrọ nke nta nso. Ee! Anyị na-ekwu okwu banyere ihe na-abịa New Year.
44.) My ezi ọchịchọ maka na ị na-dị nnọọ bụghị nanị na-abịa afọ ma ruo ọtụtụ afọ na-abịa. Nwere a mkpatụ New Year!
45.) 2017 na-aga ... New Year 2018 na-abịa! Ime a nje ọgụ n'aka, a n'aka na-agba egwu n'abalị ahụ dum. N'ịchọ ị 365 ụbọchị nke ngụkọta fun na obi ụtọ.
46.) Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ, na-eme ememe a New Year na a ọnụ ọchị na ihu gị. Ọ bụrụ na ị na-adịghị enwe obi ụtọ, ka na-eme ya na-eme ka gị na nso na hụrụ n'anya ọchị a New Year.
47.) E nwere ihe ndị na-ekpe la n'iyì ma ọ bụ ihe ụfọdụ sị na i kwughị ma ihe ike a ga-ekpe la n'iyì na-achọ inwere ị a obi ụtọ New Year.
48.)-enwe ekele na i nwere ike ịhụ a New Year na ndụ gị ọzọ. Mụta ihe site gị n'oge gara aga flaws na-na ụwa na elu mmụọ!
49.) N'ịchọ ị a nnọọ obi ụtọ New Year! Usọrọ ụbọchị ndị ị hụrụ n'anya na mgbaaka na New Year na nza nke ọṅụ!
50.) Ka Chineke n'ụba gị na hụrụ n'anya na niile ịhụnanya, chioma na obi ụtọ n'ime ụwa! Best chọrọ na a kara aka na-ekele maka New Year si m unu.
51.) On a n'ịgba oge, na-atụ gị nwere a fabulous January, udo February, na-atọ ụtọ March, ọmarịcha April, nchegbu-free May, na-enye ọṅụ June, obi ụtọ na July, gọzie August, ebube September, festive October, mma November n'ikpeazụ kasị nwee obi ụtọ December! Na ikpeazụ ma ọ bụghị mgbe niile dịghị ihe ọzọ, nwere ihe ndị kasị akpali akpali na maa mma New Year.
New Year Ozi na SMS
52.) Ọ bụrụgodị na ọ bụla anyanwụ dara na-ewepụ a ụbọchị site na ndụ anyị, ọ bụla ọwụwa anyanwụ na-ewetara ya ọhụrụ ụbọchị jupụtara olileanya na ohere nanị maka anyị. Ahu nagide kwa ụbọchị iji na-n'ụzọ kwekọrọ nnọọ nwere.
53) Ọ dịghị onye nwere ike na-aga azụ na oge mmadụ ịgbanwe mmejọ ma ọ bụ emehie ihe. Ya mere, na-eche echiche banyere gara aga, na-arụ ọrụ na onyinye-eme ka a mma n'ọdịnihu.
54.) Ị na-na na mma ugboro, lee gara aga niile demotivating akpata ndụ gị ma na-agbalịsi n'ihu.
55) Nweta ndị nku na-enwekwa ọṅụ ọhụrụ elu! Ọma na oge ntoju gị zuru ezu nke a New Year.
56.) Ka ọṅụ n'ebe obibi unu na ịhụnanya na obi gị. Dị ka New Year na-eru nso, olileanya na ọ na-eweta, tinyere ozi ọma ma hụ ya n'anya n'ihi na ị!
57.) Dị ka New Year okụt ụzọ ya site na snowy oyi, ehihie na abalị, n'ebe a na-eziga gị a na-ekpo ọkụ hello na a uko amakụ! Ezi afọ ọhụrụ!
58.) Ị bụ a ọrọ,
na ị na-a-eme ya eme.
Ka ị na-eme na imeta ibu rụzuru,
na kwa afọ gara.
Niile kasị mma maka New Year.
59.) ide kasịnụ akụkọ i nwere ike maka onwe gị. Mepee akwụkwọ ọhụrụ nke a New Year na-amalite na-ede!
60.) Ka onye ọ bụla ụbọchị na ị na-eteta, n'anya na mirror obi ụtọ ị na-esi atọ gị ụtọ na onye ọ bụla ị na-ezute! N'ịgbasa obi ụtọ na bụ'abụ a New Year!
61.) Dị ka chi ọbụbọ nke New Year na-eru nso, ọ na-ekwe nkwa na ị na a mma na imezu echi.
62.) Echefu niile wetara ahụmahụ nke afo gara aga na-atụ anya ka onye obi ụtọ ihe nọ na-echere gị.
63.) Cheers ka a New Year abịa! Nwere na-atọ ụtọ otu!
64.) New Year na-abụghị nanị banyere na-agbanwe agbanwe ụbọchị ma dum direction. Ka afọ jupụta bụ'abụ na gaiety.
65.) Ka mgbe ọjọọ eme ka ndi-ray nke olileanya a New Year.
Afọ 66.) Ka New Year-eme ka ọhụrụ na-enwe olileanya, ọhụrụ amuma na ọhụrụ ụtọ.
67.) Dị ka afọ agwụ, nwere ike niile negativity na ihe isi ike kwụsị oke; nwere ike na New Year-eweta naanị na ihe niile na-mma.
68.) Ka onye ọ bụla ụbọchị nke New Year na-ewetara gị obi ụtọ ịtụnanya dị ka curled petals nke a ifuru na-agbasa ụtọ-esi ísì ụtọ nwayọọ nwayọọ dị ka ọ na-ekpughere oyi akwa site na oyi akwa.
69.) Ka New Year-eme ka ụzọ gị plethora nke ohere na-ekwe ka gị kpaa ihe ịga nke ọma akụkọ.
70.) Dị ka ụwa na-etolite ọzọ afọ okenye m chọrọ ka ị na-enwe obi na-anọgide na-eto eto na-eji obi ụtọ New Year na mgbe niile.
71.) My ọchịchọ maka na ị na-abụghị nanị na naanị ndị na-esonụ afọ kama onye ọ bụla nke niile afọ na ị na-ebi, na ndụ nke a na karịrị. Nwere a na-eme New Year n'ihu.
72.) Nke a New Year nwere ike ị ghara ịdị gị niile na-atụ egwu, obi abụọ na-echegbu dị ka ị na-eme ka ụlọ maka na nrọ, ọchịchọ na ọṅụ.
73.) Dị ka afọ a na-mbukota ya akpa, m na-achọ ka ị na niile enweghị nchekwube na nsogbu na-emekwara, na New Year-eme ka ihe nweta na chọsiri ike inweta ihe maka gị.
74.) Kwa New Year anyị na nrọ nke a ụwa ka mma maka anyị na nke anyị. Nke a Year ka anyị buru ihe onus ime ka ụwa a mma unu ebe, m na onye ọ bụla ọzọ.
75.) Nke a New Year nwere ike i nwere ike ideghari akụkọ ndụ gị n'ụzọ ị chọrọ ya na-adị.
76.) Nke a New Year mgbe ka iru újú na mwute ígwé ojii gị doo anya na positivity, n'ihi na ọ bụ nke ikpeazụ omume ọma nke ga-enyere wetara na anwụ na ndụ gị.
77.) Cheta na ọ dịghị New Year nwere ike ịbụ zuru okè. Ma mkpa ka ị na-eleghara ihe na-adịghị mma na ịnabata mma.
78.) Nke a New Year nwere ike ị amaba n'ime mkpụrụ obi gị na-etolite ebighi-ebi enyi onwe gị.
79.) Ka onye ọ bụla ụbọchị nke New Year na-n'ịgba gị gbara gburugburu ndị na-elekọta.
80.) Nke a New Year m na-achọ gị nwere na-emeghe uche maka gị mgbe ihe obere ịtụnanya ndụ nwere ike itu gị ụzọ.
81.) Nke a New Year m olileanya na onye ọ bụla nzọụkwụ ị na-na-eduzi ndị na-ngọzi nke Chineke.
82.) Ọ dịghị Year nwere ike ịbụ a bed nke Roses. Ma, m na-achọ gị obi ike na obi ike na-atụgharị ọ bụla mgbochi n'ime ohere n'oge New Year.
83.) Ka gị New Year-adị ka na-egbuke egbuke dị ka ìhè anyanwụ na dị ka ísì dị ka okooko osisi.
84.) Ka niile gị na nrọ si afọ gara aga uzo n'ime rụzuru n'oge a New Year.
85.) Nke a New Year dị ka ị na-aga kwupụta na-emezu ihe niile gị na nrọ nwere ike ọ dịghị atụ egwu na-abịa gị ụzọ igbochi gị ụzọ.
86.) Ka ochie afọ-ewepụ niile sorrows na nhụsianya dị ka ọ na-aga site na jupụta elu gị na-abịa ụbọchị na anwụ na-enwe obi ụtọ ugbu a na mgbe nile.
87.) Nke a New Year nwere ike ị na-ahụ a na-ahụ n'anya, ma kwụsie ike n'aka enyi na enyi oge ọ bụla ị na-agbatị gị.
88.) Ezi ihe ịga nke ọma na-abịa naanị ndị bụ ndị dị njikere maka ya. Ya mere mgbe kwụpụ azụ na mgbe niile nwere obi ike na-anabata ịma aka ndị ọhụrụ. N'ịchọ ị a nnọọ obi ụtọ na afọ ọhụrụ 2018.
89.) Ka m na-achọ gị a nnọọ obi ụtọ New Year tupu ekwentị edoghi ina nnukota onu na internet kwubara. Obi ụtọ na New Year 2018!
90.) Ka anyị nwere party coz ọ bụ New Year oge. Agba Obi ụtọ na New Year 2018 na m niile abalị, nke mere na anyị nwere ike kwụsị afọ ọnụ na-amalite afọ ọhụrụ ọnụ.
Ka oriọna nke ọṅụ, ìhè ndụ gị jupụta ụbọchị gị na
ndị na-egbuke egbuke sparkles nke udo, ọṅù na-atọ ya ụtọ. Obi ụtọ na New Year ..................... obi ụtọ afọ ọhụrụ ozi maka enyi
m zutere ịhụnanya, ahụ ike, udo na ọṅụ,
ọ dị ha mkpa a na-adịgide adịgide n'ebe na-anọ.
M nyere ha Ua address olileanya ha rutere n'enweghị nsogbu.
Obi ụtọ na New Year
niile nke na-akpali u,
ihe niile nke pụtara ọtụtụ 2 u,
ihe niile na-eme ka ị chịa & na-eweta ị ọṅụ ........................... ..best obi ụtọ afọ ọhụrụ chọrọ enyi
m na-achọ 4 u na afọ ọhụrụ.
Dị ka 2017 epupụta, nwere ike ọ na-ewe pụọ na ya niile gị sorrows na-echegbu.
Dị ka 2018-abịarute, nwere ike na ọ na-ewetara gị na-agwagbughị agwagbu obi ụtọ na ọganihu.
Ka nke a afọ ọhụrụ na-eweta dị nnọọ obi ụtọ na-akwa,
onye ọ bụla hụrụ naanị gị hụrụ n'anya,
All gị nsogbu ga-rụchaa
Ọ bụ n'ihi na ị pụrụ iche m ọhụrụ afọ chọrọ .................... ........ obi ụtọ afọ ọhụrụ ozi
a obi ụtọ na afọ ọhụrụ.
Ka-a mma mmadụ,
a mma ezinụlọ mmadụ,
na ọ dịghị ihe ọzọ a mma nwa amaala na 2018 ..
Chineke bye 2017!
Pholon k kaghaz kwa
Afọ Ọhụrụ || afọ ọhụrụ msgs na hindi ||
Ehihie na abalị na-Dark ma Days bụ Ìhè,
Echere gị Life ga-enwe mgbe nile Bright.
Ya mere m Ezigbo adịghị enweta Egwu
Coz, Chineke Onyinye anyị a "ika afọ ọhụrụ".
Ihe nwere ike ekpe n'iyì
Ụfọdụ okwu nwere ike sị na i kwughị
Ụfọdụ mmetụta nwere ike ekpe unexpressed
Ma onye dị ka gị nwere ike mgbe a ga-ekpe.
M na-achọ ua Obi ụtọ na New Year 2018 ................. obi ụtọ afọ ọhụrụ ozi maka na enyi nwanyị
Sada barte Rahe depụtara aap ki ama,
Milte Rahe depụtara sabse pyaer aur dosti,
Aur mile a otutu fun & masti.
Na-achọ gị a..Happy afọ ọhụrụ na a
Ụbara udo & ọganihu .......................... obi ụtọ afọ ọhụrụ msgs na hindi
Aanewala har NW Laye Khusiyo ka Tyohar,
bụ ummid ka sath aao bhulke sare chịngọm
afọ ọhụrụ 2018 ko hum Sab Chebe WEL-bịa!
Jo ka chahe naa tera ho,
har NW khubsoorat aur ratain roshan ho,
Kamiyabi chumte Rahe depụtara tere kadam humesha yaar,
Ihe na ọnụ ọchị gị nke na-ekwu ka m,
ihe na gị olu nke bụrụ m,
Ihe na anya gị nke na-ekwu na m,
na unu na-na dearest m.
Dị ka Chocolate achicha aga zuru okè na Wine
My New Year Ga-ezughị okè enweghị gị.
Plz na na Me On a New Year ruo mgbe ebighị ebi.
Ezi afọ ọhụrụ !! ........................ cute afọ ọhụrụ SMS maka na enyi nwanyị
na-eto eto n'obi na-R jupụtara mkpu, na mgbe a echiche nke sorrows.
Ochie na-aga, ma ụtọ Young Year 2018 Abịa merrily na echi.
Ya Ikpeazụ Evening Of 2017.
Ya mere, na-achọ UA nnọọ obi ụtọ Evening.
Ọzọkwa Echere U Great Days Na 2018
All abịa Years Na Ur Life, Wee Jupụta na ọṅụ.
Ka afọ ọhụrụ
Mee ndị a chọrọ ka unu nile
Mmetụta ịhụnanya nke ịhụnanya, nkasi obi nke n'ụlọ
Joy maka gị na ụmụ gị,
Company na nkwado nke ezinụlọ n enyi
A n'anya obi na-anabata
N emeso niile mmadụ dokwara
inwetara nke ihe ọmụma n
akụ nke di iche iche
Obi Ike ichọ n-ekwu eziokwu
bụrụgodị na ọ pụtara guzo naanị
olileanya n nrọ nke a dị nnọọ ụwa n
The ọchịchọ ime ka ọ na-eme
a ìhè na-eduzi gị ụzọ
Inyere aka ike ịdị n'otu
juu n udo n'ime obi gị,
ka mmụọ nke a ezumike
oge ju gị obi na ịhụnanya
na udo na juu
N'ịchọ ị ọtụtụ ọchịchọ maka
na New Year tupu!
ka nke na-abịa afọ na-a dị ebube otu na-agọzi gị niile ga-eme n'ọdịnihu na-agbalịsi na ihe ịga nke ọma
Ka oge obi ụtọ na-ekpo ọkụ na-echeta dịtụrụ gị afọ ọhụrụ. Nwere nnukwu afọ. Ezi afọ ọhụrụ.
Obi ụtọ na afọ ọhụrụ tupu ka ị & Ua ezinụlọ.
Nke a afọ wll wetara u ọganihu,
akụ na ụba,
ihe ịga nke ọma,
obi ụtọ &
Obi ụtọ na 2018.
Enwe Évry bit nke ndụ
Rab se ke aap khus Rahe depụtara sabse ..
Obi ụtọ na New Year !! .. ....................... kacha mma obi ụtọ afọ ọhụrụ chọrọ maka enyi
Mee ka gị na New Year a n'ume nke fun! Usọrọ ọhụrụ mmalite na
ezimezi oku na-ekele ndị enyi gị na ndị ezinụlọ na eve nke afọ ọhụrụ 2018
na m ka ya bụrụ na ọ dịghị otu adọka trickles ala gị ǹtì a New Year.
Ka ị na-gọziri agọzi na ọṅụ na obi ụtọ niile n'afọ.
Ifu ihe niile WTF ọjọọ, na-anabatanụ niile WTF ezi chọrọ ị a nnọọ obi ụtọ na afọ ọhụrụ.
Ka ika New Year choputara ị ọhụrụ, obi ụtọ, ahụ ike, na ihe ọṅụ, ihe-eji obi ụtọ na ndị ọzọ na afọ ojuju.
Ebe a na-achọ inwere ị a Obi ụtọ na New Year ............................ kacha mma obi ụtọ afọ ọhụrụ SMS
Wepụ Hate, abịa, Ekworo, iwe n'obi, ibu iro, Anyaukwu gị dictionary ọhụrụ a afọ eve
na-eji dochie ha na Love, Inyefe, Nkwado, Ọmịiko, Ime ihe n'eziokwu na Afọ Ojuju,
a na-achọ inwere ị a nnọọ obi ụtọ na afọ ọhụrụ ...... ................. kacha mma obi ụtọ afọ ọhụrụ chọrọ SMS
Ka mmụọ nke oge nke New afọ ju gị obi na juu na udo. Na-achọ gị nwee obi ụtọ afọ ọhụrụ!
Ka nke a afọ ọhụrụ ịbụ nzọụkwụ n'ihu,
Na-eduga gị ọhụrụ ahụmahụ,
New okporo ụzọ inyocha na ọhụrụ ihe ịga nke ọma iru!
Obi ụtọ na New Year 2018 ................................ kacha mma obi ụtọ afọ ọhụrụ SMS
Lets mgbanaka a afọ ọhụrụ na naanị ezi ihe na-achọ gị nwee obi ụtọ afọ ọhụrụ.
Apake jivan isi prakash
"Obi ụtọ na afọ ọhụrụ" ...................... kacha mma obi ụtọ afọ ọhụrụ SMS na hindi
My Ụkpa chọrọ maka a magburu afọ ọhụrụ.
Ka Chineke gọzie gị. Na-achọ gị a nnọọ obi ụtọ na afọ ọhụrụ .................................... kacha mma obi ụtọ afọ ọhụrụ SMS maka enyi
na niile ịhụnanya nke obi, m na-achọ na ị na a obi ụtọ mara mma ma dị ebube New Year.
Ka chi onyinye ị a style iji tọghata gị nrọ n'ime eziokwu na a afọ ọhụrụ. Na-achọ gị Obi ụtọ na afọ ọhụrụ.
M na-achọ na ị na-agafe ọtụtụ milestones na ị na-aga nke afọ a. M na-achọ a nnọọ obi ụtọ na afọ ọhụrụ.
Joy, obi ụtọ, ịhụnanya na ezi ahụ ike a niile m na-achọ ka ị na nke a afọ ọhụrụ. Na-achọ gị Obi ụtọ na afọ ọhụrụ.
Olileanya na The New Year na-eweta ibu nke ezi obi ụtọ n'ihi na ị, Na-echere gị Obi ụtọ na New Near na jisie.
Ka ndị nile na gị na nrọ-emezu, a afọ ọhụrụ. Na-achọ gị nwee obi ụtọ afọ ọhụrụ.
Kemgbe Coming Year nwere ike ndụ gị jupụta na obere ememe nke Obi Ụtọ ...
chọrọ ị a Bright, Obi ụtọ na-agaziri New Year 2018 na Chineke na-agọzi ..
Wet Ua ndụ na Obi Ụtọ & Bright bụ'abụ,
Da u Joy na Ọganihu maka dum Year,
Ma ọ bụ m New Year chọrọ 4U Ezigbo ...
iche ua nnọọ obi ụtọ na afọ ọhụrụ.
Nọgidenụ na-ahụ ọnụ ọchị
Nkume na mgbu,
Chee echiche nke ọṅụ,
Ọ bụ afọ ọhụrụ! Obi ụtọ na afọ ọhụrụ 2018
afọ ọhụrụ SMS na, afọ ọhụrụ SMS maka na enyi nwanyị, obi ụtọ na afọ ọhụrụ ozi sample, afọ ọhụrụ SMS 2018, afọ ọhụrụ chọrọ maka enyi, obi ụtọ na afọ ọhụrụ ozi Gujarati, afọ ọhụrụ ozi 2017, na-akpa ọchị obi ụtọ afọ ọhụrụ ozi
উপদেশ মূলক কথা উপদেশ মূলক এস এম এসbangla upodesh mulok kotha bangla upodesh bani